रोचक समाचार Archives - नेपाली समाचार
सिटामोल अब सरकार आफैले उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ दोस्रो साताबाट सिटामेला उत्पादन गरी बजारमा लैजाने तयारी गरेको छ नेपाल औषधि लिमिटेडले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी माघ दोस्रो साताबाट सिटोमोल उत्पादन गरी बजारमा लैजाने तयारी भईरहेको जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कम्पनीका महाप्रबन्धक डा. रोभस कुसम सुवेदीले आगामी माघ दोस्रो साताबाट सिटोमोल उत्पादन गरी बजारमा लैजान तयारी भईरहेको जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयले सिटोमोल उत्पादनको काम एक वर्ष अघि नै सुरु गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो…
"सिटामोल अब सरकार आफैले उत्पादन गर्ने"
छापामाकति पाए म्यादीले ? यस्तो रहेछ विवादको कारण
काठमाडौँ , १० पुस — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरीको बिदाइका क्रममा दोलखा र कालिकोटमा झडप भयो । दुवै घटनामा म्यादी प्रहरीको असन्तुष्टि थियो– दिने भनिएको सेवासुविधा प्रहरीले कटौती गरेर दियो । तर प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपाने म्यादी प्रहरीमाथि तलब र सुविधामा कहीं पनि कुनै भेदभाव नगरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार म्यादी प्रहरीले पाउने स्थानीय भत्ता (दुर्गम भत्ता) र रासन भत्ताबापत पाउने रकम जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ । न्यौपानेले देशैभर…
"छापामाकति पाए म्यादीले ? यस्तो रहेछ विवादको कारण"
प्रविधिट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीको चस्मामै क्यामेरा फिट !
ट्राफिक पुलिस चस्मा लगायर ललितपुर । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारवाहीलाई सशक्त बनाइरहेको छ । लेन अनुशासन, मापसे, सिट बेल्ट, जेब्रा क्रसिङदेखि तीव्र गतिलगायतका विषयहरुमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष निगरानी गरिरहेको छ । सबैलाई ट्राफिक नियम पालना गराउन र निगरानी बढाउन प्रहरीले सिसी टिभी, गोप्रो क्यामेरादेखि नयाँ प्रविधिहरु भत्र्याइरहेको छ । यसरी नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा प्रहरीले पछिल्लो पटक क्यामेराजडित चस्मा प्रयोगमा ल्याएको छ । ललितपुर ट्राफिक प्रहरीले पहिलो पटक यो…
"प्रविधिट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीको चस्मामै क्यामेरा फिट !"
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा युवा माझ सबैभन्दा लोकप्रिय मोटरसाइकल पल्सर नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी थालिएको छ । बजाज अटो क्राफ्टले नेपालमा बजाजका मोटरसाइकल उत्पादन सुरु पनि गरिसकेको छ । निकै लामो समयदेखि उत्पादन सुरु हुने कुरा आएपनि उत्पादन सुरु हुन सकेको थिएन । अब भने बजाजको डिस्कभर उत्पादन सुरु भएको छ । अब छिट्टै बजाज १५० सिसिको उत्पादन सुरु गर्छौ बजाज अटो क्राफ्टका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले भने । उत्पादन सुरु भएको १७…
"अब नेपालमै पल्सर मोटरसाइकल उत्पादन हुने, के मोटरसाइकलको मुल्य घट्ला त ? अहिले कुन बाईकलाई कति मूल्य पर्छ पुरा विवरण हेर्नुहोस्"
विश्वकै अग्लो त्रिशूल रहेको धारपानीलाई देशकै पर्यटनको गन्तव्य बनाउने तयारी
पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर धारपानीलाई १० वर्षभित्रमा मुलुककै पर्यटनको गन्तव्य बनाइने भएको छ । विश्वको अग्लो त्रिशुलका कारण चर्चामा रहेको धारपानीलाई अबको १० वर्षभित्र मुलुककै प्रमुख पर्यटनको गन्तव्य बनाइने मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । पाण्डवेश्वर मन्दिरको अवस्था बुझ्न पुगेका शान्ति निकेतन विद्यालय घोराहीका विद्यार्थीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव विष्णुराम आचार्यले १० वर्षभित्र धारपानीलाई पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने गुरुयोजनासहित काम भइरहेको जानकारी दिए । ब्रिटिस काउन्सिलको कनेक्टिङ क्लास रुम आई.एस.ए.प्रोजेक्ट फर ग्लोवल एजुकेशनअन्तर्गतको…
"विश्वकै अग्लो त्रिशूल रहेको धारपानीलाई देशकै पर्यटनको गन्तव्य बनाउने तयारी"
आमा तरुनी एउटा गीत नै छ नी “छोरी भन्दा आमा तरुनी”। सामान्यतया आमा र छोरीमा को तरुनी हुन्छ भनेर प्रश्न ग¥यो भने उत्तर छोरी नै हुँन्छ तर नायिका करिश्माको हकमा भने यो लागु नै हुँदैन । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सदाबहार नायिका करिश्माको सुन्दरतामा लठिनेहरु आज पनि कम छैन । उनको सुन्दर र उनको फैसन स्टाईल हरकोही नायिकालाई मात दिने खाल्का छन् । यतिबेला राजनितीमा पनि सक्रिय कश्मिा र उनकी छोरी कबिता मानन्धरलाई एकसाथ उभ्याईयो भने…
"“छोरी भन्दा आमा तरुनी”"